नेपाल बैंकको २३.७४% हकप्रद भर्ने म्याद बुधबारसम्म, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » नेपाल बैंकको २३.७४% हकप्रद भर्ने म्याद बुधबारसम्म, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंक लिमिटेडको २३.७४% हकप्रद भर्न भोलीसम्म समय बाँकी छ । जेठ १० गते बैंकिङ समयसम्म मात्र नेपाल बैंकको हकप्रदमा आवेदन दिन पाइनेछ । बैंकले वैशाख ७ गतेदेखि १००ः२३.७४ अनुपातमा १ करोड ५४ लाख ३१ हजार ८४० कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । राष्ट्र बैंकले तोकेको चुक्ता पुँजी पुर्याउन बैंकले २३.७४% हकप्रदको बाटो रोजेको हो । हकप्रदपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ४ करोड २६ लाख ६२ हजार २०० रुपैयाँ पुग्नेछ । यो हकप्रदमा चैत २८ गतेसम्म कायम रहेका सेयरधनीले मात्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड सीटीसी महल सुन्धारा काठमाडौंमा गएर आवेदन फारम भर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, नेपाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय धर्मपथ काठमाडौं सहित अधिकांश शाखा कार्यालयबाट पनि यो हकप्रदमा आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केट हो । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४५ करोड ९५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ छ ।
प्रकाशित : Tuesday, May 23, 2017
तनहुँमा मतपेटिका बोकेको गाडी एम्बुसमा पर्यो, मतपत्र ध्वस्त भएको अनुमान, थप विवरण आउन बाँकी !
बधाई छ ! नेपाली कांग्रेसले पनि खाता खोल्यो, प्रदेश नम्बर ६ मा प्रदेश सभामा कांग्रेसका उम्मेदवार बिजयी !
गोरखा- २ को सातौँ अपडेट, बाबुरामले भारी अग्रता बढाए, नारायणकाजीलाई हम्मे-हम्मे !
हरेक नेपालीले एकपटक पढ्नै पर्ने लेख, 'बैंकको ब्याज'
रविन्द्र मिश्रले हार्ने 'कन्फर्म', विवेकशील पार्टीकै कार्यकर्ता भन्छन्, 'तराजु राम्रो भन्ने साथीहरुले रुखलाई भोट हालेछन्'
बैतडी अपडेट : एमाले भन्दा काँग्रेस तेब्बर मतले अगाडि, एमाले कार्यकर्ता भन्छन्, 'बोहोनी नै झुर भो'
गृह मन्त्रालयबाट सार्वजनिक गर्यो यस्तो सूचना
काठमाडौंको बाटोछेउमै यौन धन्दा: यसरी ग्राहक खोज्दै हिड्छन् महिलाहरु (भिडियोसहित)